Idaacada Voice of Israel oo faafisay in amiir Sucuudi ah si qarsoodi ah usoo booqday Isra’iil - Horn Future
Idaacada Voice of Israel oo faafisay in amiir Sucuudi ah si qarsoodi ah usoo booqday Isra’iil
Tel Aviv (Horn Future)-Wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska raysal wasaaraha guumaysiga Isra’iil ayaa diiday inay xaqiijiyaan ama ay beeniyaan war uu faafisay idaacada (Voice of Israel) oo ah in amiir Sucuudi ah si qarsoodi ah u booqday Isra’iil maalmihii la soo dhaafay.
Idaacadan wariyheega arrimaha Carabta ayaa waxa uu sheegay in amiirkan Sucuudigu u yimid Isra’iil si uu ugala hadlo saraakiisha sare ee Isra’iil aragtida ah, in hore loo daqaajiyo waxa uu ku tilmaamay nabadda gobolka.
Waxa idaacadani ay ku sheegtay website ka ay leedahay in amiir katirsan boqortooyada Sacuudiga si qarsoodi ah usoo booqday dalka maalmihii ugu dambeeyay,kaas oo la kulmay dhowr hoggaamiyaal ah oo Isra’iiliyiin ah oo ah oo ka kala socda heerarka siyaasadeed iyo kan amniga.
Tani ayaa waxay imanaysaa kadib warar tiro badan oo ay tabisay Isra’iil oo rasmi ah,gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyay oo ku saabsan wadashaqayn iyo kulamo qarsoodi ah oo dhexmaray Isra’iil,iyo amiirada qoysaska Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Warbaahinta Isra’iil ayaa sidoo kale hore u faafisay in madaxa sirdoonka qoyska Sucuudigu soo booqday Isra’iil,iyada oo intii uu ku guda jiray socdaalkan uu la kulmay hoggaamiyayaasha Isra’iil bisha June si loo diyaariyo shir goboleed iyadoo la kaashanayo waxa loogu “dowladaha qonyar socodka ah.”
Raysal wasaaraha guumaysiga Isra’iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore uga hadlay laftigiisu arrimahan waxana uu ku faanay in Isra’iil ay maamusho shabakadaha xidhiidhada iyo danaha ka dhaxeeya dalalka Carabta, marka laga daro Masar iyo Jordan oo uu muujiyay rajada laga qabo in “iskaashigan” ka gudba heerka qarsoodiga ah oo u gudbo heer muuqda.
« Kashmiri leaders face arrest as Indian minister visits	» MiddleEastMonitor:Imaaraadka Carabta iyo Isra’iil xidhiidhkooga oo si degdeg ah u koraya